Qubanaha » Gudoonka Barlamanka oo shaaciyey Xiliga uu furmaayo kalafadhiga 1aad ee barlamanka.
Gudoonka Barlamanka oo shaaciyey Xiliga uu furmaayo kalafadhiga 1aad ee barlamanka.
Guddoonka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyey in Kalfadhiga 1aad ee Golaha Shacabka uu si rasmi ah u furi doono maalinta arbacada ah ee soo socota oo ay taariikhdu ku beegan tahay 01-March-2017.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) ayaa yiri ayaa ugu baaqay Xildhibaanada Baarlamaanka inay isu diyaariyaan kalfadhiga baarlamaanka oo furmi doona maalinta Arbacada ee soo socota.
“Waxaan ku wargelinayaa Jaalleyaasha Golaha Shacabka in ay u diyaar noqdaan furitaanka Kalfadhiga 1aad ee Golaha Shacabka oo si rasmi ah u furmi doona maalinta arbacada ah ee ay taariikhdu tahay 01-March-2017, saa daraadeed waxaa Xildhibaannada Golaha Shacabka laga doonayaa dhammaan iney diyaar ku yihiin maalintaas xarunta Golaha Shacabka, saacadda 09:00am subaxnimo”